निर्वाचन आचारसंहिता आज देखि लागू
बुटवल,फागुन १८ निर्वाचन आयोगले आज देखि लागू हुने गरी निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न आज देखि स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको हो । हिजो...
काठमाडौं, फागुन १७ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै हालतमा पनि चुनाव गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ...
स्ववियुको चुनाव अन्योल : के हुन्छ भोली ?
बुटवल, फागुन १७ करिब आठ वर्षपछि हुन लागेको स्ववियु निर्वाचन अन्तिम समयमा आएर फेरि अनिश्चित बनेको छ । २८ वर्षे उमेर हद तोकेर मिश्रित प्रणालीमा हुन लागेको चुनाव नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ, बिप्लव निकटको अखिल क्रान्तिकारी तथा मधेस केन्द्रित दल...
प्रधानमन्त्रीले आज देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने ...
काठमाडौं, फागुन १७ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । उहाँले बेलुका ५ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट देशबासीलाई सम्बोधन गर्न लाग्नुभएको उहाँ प्रेस सल्लाहाकार गोविन्द आचार्यले...
१७ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रायले बिदाइ भेट गर्नुभएको छ । आफ्नो कार्यकाल पुरा गरी दिल्ली फर्कन लाग्नुभएका रायले आज बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक बिदाइ भेट गर्नुभएको हो । भेटका क्रममा...
१७ फागुन, काठमाडौं । आज मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने भएको छ । दिउँसो २ बजे प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयगत एजेन्डामाथि छलफल हुने छ । वैठकमा सरकारका नियमित कामकारवाहीको समिक्षाका साथै स्थानीय तह पुर्नसंरचाना आयोगको...
१७ फागुन, काठमाडौं । सत्तारुढ दल र असन्तुष्ट मधेशी मोर्चाबीच अहिले छलफल भइरहेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेशी मोर्चाबीच बिहान साढे १० बजे प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा छलफल जारी छ । बैठकमा स्थानीय निकायको निर्वाचन, संविधान...
कुलमानलाई असफल बनाउन बिजुलीको खम्बा ढालियो !
१७ फागुन, काठमाडौं । कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा लोडसेडिङ हट्न थालेपछि अत्तालिएका विद्युत- माफियाहरुले अब बिजुलीको पोल ढाल्नेदेखि ट्रान्समिटर बिगार्नेसम्मका हर्कत गर्न थालेका छन् । खाडीचौरमा ढलेको पोल र बानेश्वरमा बिग्रिएको भनिएको ट्रान्समिटरका विषयमा नेपाल...